Luis Suarez oo Steven Gerrard Kula Taliyay Inuu Ciyaaraha Isaga Faristo | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Luis Suarez oo Steven Gerrard Kula Taliyay Inuu Ciyaaraha Isaga Faristo
Luis Suarez ayaa sheegay inuu ku dhawaan lahaa inuu ciyaaraha ka fariisto haddii uu ahaan lahaa Steven Gerrard ka dib markii kabtanka Liverpool uu sibxaday islamarkaana u ogolaaday inay Chelsea guul ka gaarto xilli ciyaareedkii hore taasoo keentay inay dib uga dhacaan tartanka horyaalka.
Reds ayaa markaas badisay 11 kulan oo isku xigta waxaana ay u baahnaayeen todoba dhibcood oo ay ka helaan seddexda kulan ee ugu danbeysay si ay u hantaan horyaalkoodii ugu horeysay ee tan iyo 1990kii markii Blues ay soo booqatay Merseyside bishii April.
Laakiin Gerrard ayaa kubad loo soo dhigay ka dib kufay taasoo keentay in Demba uu ka faa’ideysto islamarkaana shabaqa soo taabto, iyadoo Man City ay horyaalka qaaday.
Suarez oo ka mid ah xiddigihii Liverpool ku hogaamiyay tartanka horyaalka ayaana sheegay inuu ku fekeri lahaa inuu ciyaaraha ka fariisto haddii ay xaaladaas oo kale soo mari laheyd.
“Haddii aan ku jiri lahaa kabaha Stevie, ma ogaan laheyn inaan awood u sii yeelan doono inaan ciyaaro.” ayuu xiddiga reer Uruguay ku qoray buugiisa cusub oo qeybo ka mid ah lagu soo bandhigay wargeyska The Guardian.
“Dareen ahaan, waa qasab aad iyo aad ayay ugu adkeyd.
“Isbuucyadii ka horeysay si weyn ayaa isaga looga hadlayay, wax badan ayaa laga filayay, waxaa laga hadlayay inuu Liverpool, kooxdiisa, ku hogaamiyo horyaalka markii ugu horeysay in ka badan 20 sanadood, waxa ay ahayd sannadguuradii 25aad ee musiibadii Hillsborough, iyadoo uu ku dhintay waagaas ina adeerkiisa, ka dibna tan ayaa dhacday.
“Kabtanka, xiddigii kooxda ka soo baxay, xiddiga hal koox kaliya u ciyaaray, xiddiga dhigiisa uu yahay Scouser [dadka Liverpool], waa uu ku nasiibdarnaa inuu sameeyo qalad sidaas u weyn.
“Kuma uusan soo guuleysanin horyaalka. Stevie waxa uu bilaabay inuu aamino inaan horyaalka qaadeyno, dhamaanteen ayaan aaminay. Waxaana horyaalka uu kaga baxsaday qaab sidaas oo kale, isagoo turaanturooday xilli aan la ciyaareynay Chelsea.
“Waxaa iga dhaadhacsan in haddii Chelsea aysan heli laheyn gool sidaas oo kale ah inaysanba dhalin laheyn wax gool ah. Marka gool ay kugu leeyihiina waa mustaxill inaad ka badiso.”